Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha – Oromedia
Home » Uncategorized » Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha
(Oromedia, 8 Mudde 2016) Fedhii aangoof jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjatamu kamuu kan hin milkoofne ta’uu ABOn hubachiise.
ABOn ibsa mata duree “Maqaa ABOn Afanfajjii Uumuun Qabsoo Bilisummaa irratti Yakka Raawwatuu dha,” jedhu jalatti har’a baaseen akka hubachiisetti, shirri yeroo addaddaa ABO dadhabsiisuuf raawwatamaa ture akkuma hin milkoofne, kan gara fuulduraas akka maseenu eere.
Ummati Oromoos kana hubachuun akkuma kanaan duraa tokkummaan QBO jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ABOn hogganamu akka finiinsu ABOn dhaamee jira.
Waltahinsoota QBO jabeessan adda addaa godhaman keessaa Waltahiinsa Shanee ABO fi QC-ABO Waxabajjii bara 2014 Berlinitti tahe isa tokko akka ture kan yaadachiise ABOn,”Waltahiinsa ifatti hawaasa duratti godhame kanaanis miseensotni gam-lameenii walitti deebi’uun caasaan dhaabaa hundi sadarkaa ol aanaa irraa hanga gadiitti wal fudhachiifamee waliin dirqama fudhatuu fi hojjatuutti bobbahamee akka tures irra deebi’ee hime.
Garuu, murni gabaabaa walii galteetee godhame diiguudhaan dirqama dhaabaa fudhachuu diduun sirna dhaabaa cabsuutti akka tarkaanfate addeesse.
Itti dabaluunis, ibsi seeraa fi sirnaan alatti maqaa ABOn baafame kun kan fudhatama hin qabnee fi seeraa alaa tahuu ABOn hubachiiseera.
Kanneen qabsoon bilisummaa ummataa finiinuu irraa hirribaa dammaqan akkanaanis miseensotnii fi deggertootnii, walii gala ummatni Oromoo tarkaanfii gaafatama dhablee akkanaa gurra laachuu dhiisuun qabsoo diina irratti itti jirru finiinsuu irratti akka fuulleeffatan ABOn yaadachiiseera.
Dhuma irrattis, “fedhii aangoof jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjatamu kamuu akka hin milkoofne seenaa kanaan duraa irraa baratuun ummatni Oromoo akkuma kanaan duraa tokkummaan QBO jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ABOn hogganamu akka finiinsu ABOn shakkii hin qabu,” jedheera.
Guutummaa ibsa ABO: ibsa-abo-sirna-dhabloota-irratti
Previous: የኢሬቻዉ አደጋ እንዲጣራ ተጠየቀ
Next: Deliberately creating confusion in the name of the OLF is a criminal act